Ururo u tafaxaytay in Norway lagu soo celiyo xasaaska iyo carruurta Daacish
Xoogaga SDF oo hor taagan dagaalyahano IS ah oo isaga soo cararay Baghouz, bariga Suuriya. Foto: (AP / NTB scanpix)
Dhowr ururada gargaarka ee Norway oo ku baaqay in dowladdu talaabo qaado.Kaniisadda Kirkens Bymisjon oo qayb ka ah.
Kulan jimcihii ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ayna ka qaybgaleen kaniisadda Kirkens Bymisjon, hay’adda Redd Barna iyo wasaaradda carruurta iyo arrimaha qoyska ayaa looga hadlay wixii laga yeeli lahaa haweenka noorweejiga ah iyo carruurtooda oo ay dhaleen dagaalyahanadda IS. Dowladda Norway ma rabto in dalka dib loogu soo celiyo.
Ururadan ayaa iyagu qaba in carruurta dagaalyahanada Daacish ay yihiin kuwo aan waxba galabsan oo bilaa dambi, isla markaana qatar ku sugan loona baahan yahay in keeno dalkan sida uu qoray Aftenposten.
Waxay ku taliyeen in dhaqso ah loo sameeyo koox takhasus leh oo carruurtaas qaabila marka dalka la keeno.
Kaniisadda Kirkens Bymisjon iyo Redd Barna ayaa kulanka ay ku qabteen wasaaradda arrimaha dibadda waxay sidoo kale ku matalayeen Norsk Folkehjelp, SOS iyo UNICEF Norway.